शैक्षिक समस्या र विद्यार्थी संगठनको खस्कँदो भूमिका::Nepalese News Portal
इतिहासलाई हेर्दा परिवर्तन र विद्यार्थी आन्दोलन पर्यायका रुपमा देखिन्छन् । निरंकुशताका विरुद्ध सबैखाले आन्दोलनमा विद्यार्थीहरु सबैभन्दा पहिले सडकमा ओर्लेको देखिन्छ । जहाँनिया राणा शासनका विरुद्ध सात सालको क्रान्ति, निरङ्कुश पंचायती शासनका विरुद्ध ४६ सालको जनान्दोलन, जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय लैंगिकलगायतका विभेदका विरुद्ध भएको महान जनयुद्ध, जनयुद्धको जगमा भएको ६२/६३ को जनान्दोलन लगायत सबैखाले जनसंघर्षका मोर्चामा विद्यार्थी संगठनको अग्रणी भूमिका रहेको देखिन्छ । शैक्षिक मुद्धामा मात्र नभई जनजीविकाका सवालमा समेत विद्यार्थी संगठनले खेलेको भूमिका र त्यसैको जगमा आएको परिवर्तनको गौरवशाली इतिहास आजपनि जीवन्त छ ।
यति ठूलो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको विद्यार्थी आन्दोलन यतिबेला बिस्तारै धुमिल हुँदै गैरहेको छ । निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको प्रतिकूल अवस्थामा समेत संघर्ष र बलिदानीको माध्यमद्वारा आफ्नो क्रान्तिकारी साख जोगाउदै आएको जनताको सारथिको रुपमा परिचित विद्यार्थी संगठनहरु गणतान्त्रिक व्यवस्थाको यो अनुकूल समयमा झन् जनपक्षीय हुनुपर्ने थियो । तर विडम्बना ! आज विद्यार्थी संगठनहरु यो एतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्ने महान अवसरबाट बिमुख हुँदै गैरहेका छन् । अझ भन्दा विद्यार्थी आन्दोलन अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । वाक् तथा अभिव्याक्ति स्वतन्त्रता नभएको तत्कालिन अवस्थामा समेत आफ्नो भूमिकामा सशक्त रहेका विद्यार्थी संगठनहरु गणतन्त्र स्थापना पछिको यो अनुकूल अवस्थामा झन् किन रक्षात्मक बन्न पुगे त ? किन विद्यार्थी संगठन र समग्र विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो त ? किन कमजोर बन्दै गयो त विद्यार्थी आन्दोलन ? यी प्रश्नको निर्मम समिक्षा जरुरी छ ।
मौसमी र देखावटी आन्दोलन :
आज पनि आम विद्यार्थिहरुले तमाम समस्या झेल्नु परेको छ । परिवर्तित समय अनुरुप पाठ्याक्रम परिमार्जित हुन् सकिरहेको छैन । अनुसन्धान केन्द्रहरु बन्द अवस्थामा छन् । कलेज, विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुमा पर्याप्त अध्ययन सामग्रीको अभाव छ । प्रयोगात्मक फिल्डलगायत अन्य विषयमा आएका वजेट वर्षेनी फ्रिज भएर गएका छन् । आम विद्यार्थीको जीवनसँग गाँसिएका यस्ता सवालहरुप्रति विद्यार्थी संगठनहरु पुरै बेखवर जस्ता देखिन्छन् । अझ आफ्नो मातृ पार्टी सरकारमा छ भने त झन् यस्ता बेतिथिका विरुद्ध बोल्नु भन्दा पनि सरकार पक्षीय भएर उल्टै आन्दोलनका विरुद्ध खडा हुनु विद्यार्थी संगठनहरुको चरित्र नै बनिसकेको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुआतसंगै शुल्क वृद्धिको विरोधमा आन्दोलन गर्ने तर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने अहिले विद्यार्थी संगठनहरुको वार्षिक कार्यक्रम जस्तै भएको छ । विद्यार्थी नेताहरु आन्दोलनको उठान गर्छन् अनि आर्थिक लेनदेन मिलेपछि बिना निष्कर्ष आन्दोलन स्थगित गर्छन्, भन्ने आम बुझाइ नै बनिसकेको छ । त्यसैले, कर्मकाण्डीय हिसाबले गरिने यस्ता परिणाम बिहिन आन्दोलनले विद्यार्थी संगठन र समग्र विद्यार्थी आन्दोलनकै साख गिराइ रहेको छ ।
संगठन भित्रका गुट उपगुट :
आम विद्यार्थीको हकहित, अधिकार र शैक्षिक मुद्धामा सदैव एकजुट हुने विद्यार्थी संगठनहरु पछिल्लो समय एउटै संगठन भित्र पनि गुट-उपगुटमा विभाजित छन् । यी गुट-उपगुट समस्या समाधानका उद्धेश्यबाट नभई केवल नीजि स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रेरित देखिन्छन् । अझ संगठनको उपल्लो तहमा पुग्न अमूक नेताको सहारा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै स्थापित भैसकेको छ । विद्यार्थी संगठनमा ‘राम्रो होइन हाम्रो’ रोज्ने परिपाटीले हाबी भैरहेको छ । यस्तो अवस्था संगठनको सबै तहमा देखिन्छ । गुट-उपगुट र नीजि स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेको यस्तो संगठनले आम विद्यार्थीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्छ भन्ने कल्पना कल्पना समेत गर्न सकिंदैन ।
विद्यार्थी नेता र उनीहरुको जीवनशैली :
अधिकांस विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय कार्यालय वागबजार वरिपरी छन् । त्यसैको वरिपरी वर्षौदेखि आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु पनि छन् । विद्यार्थी नेताहरुलाई उनीहरुले नजिकबाट चिनेका हुन्छन् । वर्षौदेखि व्यवसाय गर्नेहरुले एउटा मोटरसाइकल फेर्न सकेको हुँदैन । तर, कहिँ वर्ष अगाडी चप्पल लगाएर झण्डा बोकेर हिंड्नेहरु अहिले टिपटप बनेर मोटरसाइकल चढेर हिंड्छन् । ती व्यवसायीहरुले यो सब देखिरहेको हुन्छ । सुन्छ, यो केटाले घर बनाइसकेको छ । उसले बुझ्न खोज्छ, विद्यार्थी नेताहरुको आम्दानीको श्रोत के होला ? त्यसैले यस्ता नेता र उनीहरुका अपारदर्शी जीवनशैलीले गर्दा विद्यार्थी संगठनहरुप्रति आमविद्यार्थीमा घृणा पैदा हुन् थालेको छ । आफ्नो नीजि जीवनका लागि संगठनको प्रयोग गर्ने नेताबाट आमविद्यार्थीका हकहित र अधिकारका पक्षमा के आशा गर्ने ? आम मानिसहरुमा आज यो प्रश्न जब्बर बनेर उठेको छ ।
सत्ताको चाप्लुसी :
खासमा विद्यार्थी आन्दोलनलाई प्रतिपक्ष आन्दोलनका रुपमा बुझिन्छ । विद्यार्थीका समस्या समाधानका लागि सधै उनीहरुको साथमा रहने र जनहित विपरित कुनै काम गरेमा आफ्नो पार्टी, नेता र सरकारको विरुद्धमा जनमत निर्माण गर्न पछि नहट्ने यो दस्ता आज नेताको गुलामी गर्ने प्रतिष्पर्धामा देखिन्छ । आज विद्यार्थी नेताहरु आफ्ना नीजि स्वार्थका लागि पार्टीले गरेका सबै निर्णयको समर्थन गर्न होडबाजी नै गर्न थालेका छन् । सरकारले गरेका कतिपय जनहित विपरितका निर्णयमा समेत प्रतिरक्षामा उत्रिएर विद्यार्थी नेताहरुले आफ्नो हित गरेका छन् । विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरु यसरी नीजि फाइदाका लागि सत्ताको समर्थक बनेर खडा हुँदा विद्यार्थी आन्दोलनलाई नै प्रतुत्पादक बनेको छ ।
यी त केहि प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता धेरै प्रवृतिजन्य समस्या छन्, जसका कारण आज विद्यार्थी आन्दोलन बद्नाम हुन् पुगेको छ । विद्यार्थी आन्दोलन भित्र मौलाउंदै गएका यस्ता प्रवृतिहरु नसच्याउने हो भने विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्यतामाथि अझै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । तर, सच्चिने र सच्च्याउने समय अझै छ । निरास भएर बस्ने या त्रुटी सच्च्याएर अगाडी बढ्ने ? प्रश्न हामी तिर पनि तेर्सिएको छ ।
ह्रास हुँदै गैरहेको विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्यलाई पुनर्स्थापित गराउने जिम्मा विद्यार्थी संगठनकै हो । अब विद्यार्थी संगठन र तिनका नेताहरुले आफ्नो अपारदर्शी जीवनशैली सच्याउने हिम्मत गर्नैपर्छ । अन्यथा आम विद्यार्थीहरु उनीहरुकै विरुद्धमा सडकमा नआउलान भन्न सकिन्न । विद्यार्थी आन्दोलनको गौरवपूर्ण इतिहासलाई बचाइराख्न पार्टीका नेतातर्फ फर्केको संगठनलाई जनतातर्फ फर्काउने हिम्मत गर्नु अपरिहार्य छ ।
विशेष गरी गतिहीन बन्दै गैरहेको संगठनलाइ गतिशील बनाउन आमविद्यार्थी र विद्यार्थी संगठनलाई जोड्ने गरि कार्यक्रम बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । तमाम शैक्षिक समस्याको हल खोज्न बैज्ञानिक सयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । शिक्षामा भएको निजीकरणका विरुद्ध अब देशभर एकैसाथ संघर्षमा उत्रिनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा व्यवस्था भए बमोजिम माध्यामिक तहसम्मको निशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारको ग्यारेन्टीका लागि विद्यार्थी संगठनले रचनात्मक खवरदारी गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
(लेखक: अखिल (क्रान्तिकारी) आरआर क्याम्पसका नेता हुन् )